Shiinaha COVID-19 Antibody / Antigen Detection Kit soosaarayaasha iyo alaableyda | Yinye
Badeecadani waxay ku habboon tahay ogaanshaha tayada ee COVID-19. Waxay bixisaa caawimaad ku saabsan ogaanshaha infekshinka cudurka loo yaqaan 'coronavirus' cusub.
Badeecadani waxay ku habboon tahay ogaanshaha tayada ee COVID-19 / Hargabka A / Hargabka B ee shaybaarka Xaakada / Saxarada. Waxay ka caawisaa baaritaanka cudurka infekshannada fayrasyada kor ku xusan.
Riwaayadaha cusub ee loo yaqaan 'coronaviruses' ayaa iska leh gen. COVID-19 waa cudur daran oo faafa oo ku dhaca neef mareenka. Dadku guud ahaan waa u nugul yihiin. Xilligan, bukaannada uu ku dhacay cudurka 'coronavirus' cusub ayaa ah isha ugu weyn ee laga helo infekshanka; dadka qaba cudurka asymptomatic sidoo kale waxay noqon karaan ilo faafa. Iyada oo ku saleysan baaritaanka cudurrada faafa ee hadda jira, muddada cudurku waa 1 illaa 14 maalmood, badiyaa 3 ilaa 7 maalmood. Astaamaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qandho, daal iyo qufac qallalan. Ciriiriga sanka, sanka oo dareera, cune xanuun, myalgia iyo shuban ayaa lagu arkaa dhowr xaaladood.
Qalabka baaritaanka waxaa ku jira laba xarig oo tijaabo ah:
Midkood, midab burgundy conjugate pad ah oo ay kujiraan Novel coronavirus baqshadaha antigens recombinant antigens oo ay kujiraan dahabka loo yaqaan 'Kolloid gold' .
Khadka IgM waxaa lagu sii daayay jiirka antihuman IgM antibody, khadka IgG waxaa lagu daboolay Mouse anti-Human IgG antibody. Marka mugga tijaabada ah ee ku filan lagu shubo muunada si fiican ee qalabka tijaabada, muunada waxay u guureysaa ficil cadayn ah oo ku baahsan qalabka. IgM anti-Novel coronavirus, haduu kujiro muunada, wuxuu kuxiran doonaa Novel coronavirus conjugates.
Immunocomplex-ka ayaa markaa qabta reagent horay loogu sii duubay kooxda IgM, oo sameysanaya xarig IgM midab burgundy leh, oo muujinaya natiijada tijaabada wanaagsan ee IgM coronavirus IgM. IgG anti-Novel coronavirus haduu kujiro muunada wuxuu ku xirnaan doonaa conjugates-ka Novel coronavirus. Immunocomplex-ka waxaa soo qabta reagent-ka ku dahaadhan khadka IgG, isagoo sameeya xarig Igg midab burgundy leh, oo muujinaya natiijada tijaabada togan ee Igvel coronavirus IgG. Maqnaanshaha wax khadadka T ah (IgG iyo IgM) waxay soo jeedinayaan natiijo xun. Si loogu adeego sida xakamaynta nidaamka, khad midab leh ayaa had iyo jeer ka muuqan doona aagga koontaroolka oo tilmaamaya in mugga saxa ah ee shaybaarka lagu daray iyo xuubka xuubka oo dhacay
Qeybta kale, xariiqda tijaabada waxay ka kooban tahay qeybaha soo socda: kuwaas oo ah suufka muunada, suufka reagent, xuubka falcelinta, iyo suufka wax nuugaya. Suufka reagent-ka wuxuu ka kooban yahay kolloidol-dahab isku xirey unugyada monoclonal ee ka soo horjeeda borotiinka nucleocapsid ee SARS-CoV-2; xuubka falcelinta waxaa ku jira unugyada difaaca jirka ee labaad ee borotiinka nukleocapsid ee SARS-CoV-2. Dharka oo dhan ayaa lagu hagaajiyaa gudaha aaladda balaastigga ah. Marka muunada si fiican loogu daro muunada, conjugates-ka lagu qalajiyey suufka reagent-ka ayaa la kala diri oo ay u haajiraan weheliyaan muunada. Haddii SARS-CoV-2 antigen ay ku soo bandhigto muunadda, isku-dhafan ka sameysan u dhexeeya anti-SARS-2 conjugate iyo fayraska waxaa qabanaya unugyada unugyada anti-SARS-2 ee gaarka ah ee lagu daboolay gobolka khadka tijaabada (T). Maqnaanshaha khadka T wuxuu muujinayaa natiijo xun. Si loogu adeego sida xakamaynta nidaam khad cas ayaa had iyo jeer ka muuqan doona aagga koontaroolka (C2) oo tilmaamaya in mugga saxa ah ee muunada lagu daray iyo xuub xuubka oo dhacay.
Baadhitaanka Antibody ：
Cirbadda Dhiiga Qaadista
Hore: COVID-19 / Hargabka A / Qalabka Baadhista ee Hargabka B
Xiga: COVID-19 IgM / IgG Qalabka Baadhista Antibody (Dahabiga Kolloidhka ah)
COVID-19 Dhex-dhexaadinta Qalabka Ka Hortagga Aaladda